ရေးသားသူ ကြယ်ဖြူစင် at 07:38
သူချစ်နဲ့ ကိုယ်ချစ် ကဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလည်း ဟင်
သူချစ်ကိုယ်ချစ် ကကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ... ကိုယ် ချစ်သလို သူမချစ်တော့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
တကယ်တမ်းလဲ သံယောဇဉ်က အချစ်ထက်အဓိကကျပါတယ်
ချစ်ပီးရင်မုန်းလို့ နာကျည်းလို့ ရတယ်
သံယောဇဉ်နဲ့ ယှဉ်ရင် မေတ္တာသက်ဝင်လာမှာပါ
သူက နောက်သူမတယောက် ကို အိမ်ထောင်ပြုတယ်
ဪ အချစ်ဆို တာ တြိဂံလား စတုဂံလား ပဉ္စဂံလား ဆဌဂံလား.............................???
ကြယ်.... မိုးဝေ ပြောတာ လက်တွေ့ ဆန်တယ်။
မကြီးကြယ်လို့ ဘယ်သိသေးမလည်းလို့ 
ကိုမိုးဝေ ကြီးဘက် က မောင်လေးရှိတယ်..။
သူ့ ကိုယောက်ဖကြီးလို့ သွားခေါ်တော့မယ်...။
(ဖုန်းခ ၁၅၀၀ သင့်ပါတယ်)
အချစ်က ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြစ်တည်နိုင်ပါတယ်။
လိုတာမရ၊ ရတာမလို ခြင်းက သုခတစ်မျိုးပါ။
(စကားပြောလေးတွေ ကျား/မ အရောင်ခွဲပေးနိုင် ရင် ပိုကောင်းမလားပဲ၊ ပွားကြည့်တာပါ)
Hello Thet Hter... whataterrible mistake u did! unless u love Moewai, u should not give him any hope. why u told him dreadful manners of ur lover? are u really in love? if u do, don't show ur painful love to the one who proposed u.He will take them as vitamins although actually they are poisons.
If u are really in love , don't fool Moewai...
ကြယ်ရေ ....... ဘ၀တူနှစ်ယောက်လာတွေ့ နေသလိုပဲနော်။ ဒီကဗျာလေးထဲက မိုးဝေကို ဂရုဏာသက်မိသလို ချစ်တဲ့သူအပေါ်မှာလည်း သစ္စာတည်ချင်တယ်။ ခွဲခြားမရနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်နဲ့ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ ကြိုးနှစ်ချောင်းကို ဘယ်လိုရစ်ဖွဲ့ရမလဲ။
မိုးဝေ လို ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ ကိုယ့်အချစ်တခုတည်းနဲ့သူတပါးရဲ့ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်မှုကို ဖုံးကွယ် လိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မတွေးခဲ့မိပါဘူး။ ကိုယ်က ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေနဲ့ကတိတွေပေးပြီး အခြေအနေအကြောင်းကြောင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် တယောက်နဲ့ တယောက် သဟဇတ မဖြစ်တော့တဲ့ အချိန်မှာ ဒါဟာ တဖက်သက် အပြစ်ဖို့ စရာ၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ တကယ်တော့ လက်ထပ်တာဟာ ကံစမ်းတာ တခုပဲ။ လူတွေရဲ့စိတ်သဘောက အမြဲ တည်ငြိမ် နေမယ်ဆိုတာ မှန်းရခက်ပါတယ်။ ခေတ်အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲမှုဟာ အမြဲ ကိုယ့်ကို ရိုက်ခေတ် နေမှာပဲ။ သူ့ တဦးတည်းကို ချစ်ခဲ့လို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့ဘာလိုအခြေအနေပဲ ရောက်နေပါစေ သူ့ ကို မစွန့် လွှတ်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှောင်ချိုင့်ထဲ ပိတ်လှောင်နေသလို ဖြစ်သွားမှာပဲ။ ထို့ အတူ သူ့ ကိုလဲ ကိုယ်နဲ့ အတူတူ ကြိုးတုတ်ထားသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အနောက်နဲ့ အရှေ့ကွာခြားချက်တခုက အဲဒါပဲလို ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှေ့ လဲ အခု အနောက် အိမ်ထောင်ရေးပုံစံကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံဖြစ်တဲ့ တလင်တမယားစနစ်ဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် ကြိုးတုတ်ထားတယ်လို့ ပဲ မြင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံအခြေအနေကြောင့်လဲ မိန်းမထက် ယောက်ျားပေါ် မှီခိုမှု ပိုသွားတာလို့ထင်တယ်။ ဟီ.. ရေးရင်းနဲ့ဆိုင်တာ မဆိုင်တာတွေပါ ပါကုန်ပြီ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွင့်လင်းတဲ့၊ နှစ်လမ်းသွား အချစ်တို့ နဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။
Ok, if it is not true, should the boy marriage the girl who really love him but not from his side,or should live loney until he dies?When the girl face the satuation that cant be able to marriage with him (her lover) and should or not marriage with the boy like မိုးဝေ or should live lonely until she dies?Just Selfthinking par!":)
lynn htet aung said...
အကို ညီမရဲ့ ဘလော့ကိုဖတ်ပြီး..တွေးနေတာ...ဘာရယ်တော့
မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ကိုမချစ်နိုင်တဲ.လူတစ်
ယောက်ကို ဘယ်တော.မ မချစ်သလို ချစ်တဲ.လူကို
လဲ ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ရပါစေ ချစ်နေတတ် တယ်
ဆိုတာ ခံစားမိပါတယ်ဗျာ...စာတစ်ပုဒ် ထက်ခံစား
ချက်တစ်ခု ကိုချရေးထားတယ်လို. ဘဲ ခံစားရ
ကြီးလျက်နဲ့သေး၊ နီးလျက်နဲ့ ဝေး။ အဲဒါ သုံးနှင့်လေး။
တီ ရက်စက်ထားတယ် ကြည့်ဦး
ကိုနေညိုပြောတယ် လပ်ထပ်တာကံစမ်းတာတဲ့ သမီးပျို ကံစမ်းရင်ကောင်ူမလားလို့ အဟီး